Banyere Anyị - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
A chọtara Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd. na 2006. Ọ na-elekwasị anya na ịkwalite teknụzụ igwe akụrụngwa ọbụlagodi, gụnyere flake ice igwe, igwe igwe ice, mgbochi igwe ice na ihe ndị ọzọ.
Flake ice igwe teknụzụ:
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Herbin malitere iji alloy chromed ọlaọcha mee ka evaporator ahụ ebe ọ bụ na 2009 iji melite nrụrụ ọkụ nke ice evaporator. Kinddị ọlaọcha ọlaọcha a bụ ihe pụrụ iche pụrụ iche, nke Herbin Ice Systems chebere. Ihe ohuru a meziwanye ihe na-eme ka aru di elu site na 40% jiri ya na igwe ndi ozo nke flake na China, ma gbochie nsogbu ojoo mgbe o were ha.
Teknụzụ igwe igwe:
Herbin Ice sistemụ malitere ịmalite ahụmịhe site na Vogt tube ice igwe kemgbe 2009.
Anyị zụtara ụfọdụ P34AL ejirila na July 20, 2009 site na osisi Xiaobang Ice (Nnukwu osisi ice na Shenzhen). Anyị disassembled na tube ice igwe, ma depụtaghachi ọ bụla otu n'ime mmiri, dị ka mmiri eruba director, mmiri mmiri larịị mmetụta na evaporator, Compressor mmanụ mgbasa usoro, smart mmiri ọkọnọ usoro, mgbe nile nsogbu valves, oru oma defrosting usoro na ihe niile.
Dabere na ahụmịhe Vogt, anyị malitere ịnwale ma melite igwe akpụrụ mmiri nke anyị na 2010.
Anyị ghọrọ ndị kacha mma na-emepụta igwe igwe ice na China na 2011.
Teknụzụ dị elu, ogo dị elu na ọnụahịa dị mma na-eme ka ụlọ ọrụ Herbin too ngwa ngwa na ahịa igwe igwe ice.
Gbochie teknụzụ igwe akụrụngwa:
Tupu 2009, anyị na-elekwasị anya na omenala brine ọdọ mmiri ngọngọ ice igwe.
Anyị malitere n'ichepụta kpọmkwem igwe nju oyi ngọngọ igwe igwe kemgbe 2010.
Teknụzụ ọhụrụ a na-egbochi igwe akụrụngwa bụ ike nchekwa, na-adịgide adịgide.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye igwe akụrụngwa akụrụngwa dị mma, ime ụlọ ice, ime ụlọ oyi, chillers mmiri, sistemụ dị ọcha, ndị na-etinye akpa, igwe na-eme igwe, igwe ọkụ na ihe ndị ọzọ, Anyị dịkwa mma maka nke ahụ.
(1) Isi uru nke HERBIN: Mepụta uru maka ndị ahịa ma mepụta uru maka ọha mmadụ!
(2) HERBIN na esoro usoro ihe omuma ahia nke "Ogo nke mbu, aha mbu, mbu na mbu", ga-aga n'ihu na-agbanwe ma na-emepe, na-agbasi mbọ ike ime ka asọmpi mba niile nke akụrụngwa na-eme ice, wee bụrụ ọkwa klaasị ụwa .
All ice igwe na-kpọmkwem iji na-ike, ya mere, ha nwere ike alanarị nke ọma n'oge nnyefe si anyị factory na ahịa si owuwu. Ọ dịghị ọkpọkọ na-agbasa, ọ dịghị mgbape na ebe ịgbado ọkụ, ọ nweghị esighi ike n'akụkụ mgbe nnukwu ụgbọ mmiri mba ofesi na-ebugharị n'okporo ụzọ.
Igwe igwe niile ga-agafe ule elekere 72 tupu ebufere ya ndị ahịa.
Herbin na-enye ikike nke ọnwa 24 maka igwe akụrụngwa niile.
Anyị nwekwara ndị ọrụ na-ere ahịa ere ahịa iji nyere ndị ọrụ aka ịwụnye igwe ice. Ọrụ ịntanetị na-akwụ ụgwọ n'efu maka ogologo oge.
Ndị nọ na Herbin Ice Systems:
(1) Herbin onye hiwere ụlọ ọrụ ahụ, ma jiri aha ya gụọ ụlọ ọrụ ahụ. Herbin bụzi onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-ebuputa isi ọrụ nke ụlọ ọrụ banyere imepụta ihe.
(2) Mike Li bụ onye isi ahịa ahịa, na-ahụ maka ire ụlọ ọrụ ahụ maka ma ndị China ma ndị mba ofesi. Mike nwere ahụmịhe ahịa na ụlọ ọrụ igwe igwe ihe karịrị afọ 10, tupu nke ahụ enweta akara ugo mmụta nke HAVC Major na Mahadum Zhanjiang Ocean.
Mahadum Zhangjiang Ocean bu onye ama ama maka HAVC Isi na South nke China.
Asambodo nke igwe Herbin Ice.
Ngwa akụrụngwa Herbin niile nwere asambodo CE, SGS, UL ......
Igwe akpụrụ mmiri nke Herbin nwere ihe ikikere 70, dịka patent maka flake ice evaporator's ihe ọhụụ, igwe ice flakes na-asọ oyi, igwe igwe ice na ihe ndị ọzọ.
Nhazi ụlọ ọrụ:
(1) Ngalaba HERBIN gụnyere: Ngalaba Mmepe, Ngalaba ,zụta, Ngalaba Ngalaba, Ngalaba Ogo, Ngalaba Azụmaahịa, na Ngalaba Ije Ozi Ahịa
(2) Development Department: Ibu Ọrụ maka ice igwe mma mma, ice technology mma, ike ịzọpụta mma na na;
Ngalaba chazụta: czụta ngwa ndị yiri ya na ngwa maka igwe akụrụngwa, dịka compressor, arịa nrụgide, valvụ mgbasa, condenser, wdg.
Ngalaba Na-arụpụta: Ọ bụ ọrụ maka ịmepụta igwe akụrụngwa na akụrụngwa metụtara ya.
Ngalaba Ogo: Lelee ogo igwe igwe. Na nyochaa ọkụ eletrik nke igwe ọ bụla.
Ngalaba Azụmaahịa: Ree ngwa igwe igwe ruru eru nye ndị ahịa
Ngalaba na-ere ahịa mgbe achara: Maka ọrụ maka nrụnye, ndozi maka igwe igwe a zụrụ azụ, yana ọrụ ntanetị maka ihe niile gbasara igwe na-eme ice.
Okwu mmalite nke ikike mmepụta ụlọ ọrụ
Okwu mmalite nke akụrụngwa na teknụzụ
Herbin ụlọ ọrụ nwere nke ya 3 kehoraizin obere lathes, 2 vetikal nnukwu lathes, otu zuru akpaka ịgbado ọkụ igwe, 15 ntuziaka ịgbado ọkụ igwe, 3 efere ọnwụ & ekwe igwe, otu acid-asa owuwu, otu Nickel & Chrome plating ọdọ mmiri, otu okpomọkụ ọgwụgwọ ọwara, otu polyurethane (PU) igwe juputara .........
Ndị lathes na ndị ọrụ nwere ahụmịhe na-ekwe nkwa ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
Ọgwụgwọ ndị ọkachamara na-eme ka ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enweghị nsogbu mgbe ogologo oge gachara. Zuru oke acid ịsa na nickel & chrome plating na-ekwe ka ndị na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa afọ 20.
Anyị nwere ihe karịrị mmadụ 50 na-arụ ọrụ ọkachamara na akụrụngwa ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị nwere ike ịmekwu 5-20 nke flake ice evaporators kwa ụbọchị.
Anyị nwere ndị injinia 2 maka obere ikike azụmaahịa na-eji ọkụ akụrụngwa akụrụngwa, injinia 2 maka nnukwu ikike flake ice igwe, ndị injinia 3 maka igwe ice tube na igwe igwe ndị ọzọ nwere teknụzụ dị elu.
Ná nkezi, kwa izu, anyị ga-eziga ụdị 200 nke obere ikike azụmaahịa iji igwe ice flake. 5-10 esetịpụrụ flake ice igwe buru ibu karịa 5T / ụbọchị. Setsdị 3-5 nke igwe akụrụ mmiri buru ibu karịa 3T / ụbọchị.
Herbin ewulitela mmekọrịta chiri anya na ndị na-eweta ihe mejupụtara ya, dịka Bitzer, Frascold, Refcomp, Danfoss, Copeland, Emerson, O&F, Eden, were gabazie.
A na-eji igwe akwara Herbin eme ihe n'ụwa niile.
Dịka ọmụmaatụ, 95% nke igwe ice ice eme na Made-in-Turkey nwere Herbin flake ice evaporators nke ụlọ ọrụ Sogutma dị na mpaghara.
65% igwe akpụrụ mmiri emere na China emebere wtih Herbin flake ice evaporators.
30% nke igwe teknụzụ igwe dị elu na East Asia sitere na Herbin Ice Systems, dịka Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Cambodia, Laos .....
A na-eri ọkpọkọ ice dị ka nri na ndụ a na-adị kwa ụbọchị na mba ndị ahụ.
80% nke ụgbọ mmiri ndị China na-eji igwe akpụrụ mmiri nke Herbin.
Herbin bụ nnukwu azụmahịa flake ice igwe soplaya maka Carrefour, Wal-Mart, Tesco, Jiajiayue na ndị ọzọ Chain ụlọ ahịa. A na-eji flakes ice mee ihe maka ire ere mmiri, azụ, izute na ihe ndị ọzọ.
Igwe nri ice na igwe ice ice nke Herbin bụ ndị Sanquan Foods, Shineway Group, na ụlọ ọrụ nhazi nri ndị ọzọ.
Binlọ ọrụ Herbin nwere ndị nnọchi anya na ọfịs na Middle East, South Africa, East EU, Northern EU na na.
1. Ngosipụta ngwaahịa
Ngwaahịa na-ekewa n'ime ọhụrụ ngwaahịa, pụrụ iche na ngwaahịa na general ngwaahịa.
(1) Ngwaahịa kachasị ọhụrụ: Ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ bụ igwe ice flake. Site na iji ihe ohuru iji mee ka ndi na ekpochapu oku, ndi igwe anyi na achapu oku bu 75KWH nke oku eletrik maka ime 1 tan ice flakes (Dabere na mmiri 30C na 20C). Igwe ndị ọzọ na-acha uhie uhie nke China na-eri ma ọ dịkarịa ala 105KWH nke ọkụ eletrik maka ịme kwa 1 tan ice flakes.
Anyị nwekwara ụdị ide mmiri ice flake maka ire ere, ha na-eri ọkụ 65KWH maka ọkụ ọkụ ọ bụla maka ị na-eme 1 tọn ice ọ bụla na nkezi.
(2) Ngwaahịa pụrụ iche: Anyị nwere ọnụahịa pụrụ iche maka igwe ice ice 5T / ụbọchị na 2020. Anyị na-enwetakwa ihe nlereanya a mgbe niile. Anyị nwere ike ịre igwe igwe ice 5T / ụbọchị mgbe niile na ọnụahịa kacha mma n'ụwa, ma ha dị na ngwaahịa. Anyị chọrọ naanị ụbọchị 18 maka ịme igwe igwe ice 5T / ụbọchị ọhụrụ site na 0.
(3) General ngwaahịa: General azụmahịa flake ice igwe bụ obere ikike, na anyị na-nnukwu ego nke obere flake ice igwe na ngwaahịa. Ha kwụsiri ike ma nwee ogologo oge ọrụ, a na-ere ha dị ka nkịta na-ekpo ọkụ kwa ụbọchị.
2. Nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa
Azụmahịa eji obere ikike flake ice igwe na-ọtụtụ-eji na ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, maka idebe nri ọhụrụ.
A na-ejikarị nnukwu ice ice / igwe igwe akpụrụ mmiri eme ihe na osisi nhazi nri. A na-agbakwunye ice n'ime nri ozugbo n'oge nhazi.
Nnukwu akụrụngwa ice na igwe ice tube bụkwa maka azụmaahịa ice na-ere. Osisi akpụrụ mmiri na-ere ice flake ahụ maka ndị na-akụ azụ, ma ọ bụ ree akpa ice buru ibu na kọfị / Ogwe / họtel / ụlọ ahịa ihe ọ drinkụ coldụ oyi / ụlọ ahịa na ihe ndị ọzọ.
A na-eji igwe akụrụngwa anyị eme ihe maka nnukwu ụlọ ahịa, nhazi anụ, nhazi nri mmiri, anụ ọkụkọ, ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ, ụlọ ọrụ ọgwụ na-acha ọkụ, Mbelata okpomọkụ na Mine, ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha, ụlọ ọgwụ, azụ Oceansọ mmiri, ihe owuwu ihe owuwu na ihe ndị ọzọ .
Site na teknụzụ kachasị ọhụrụ, igwe ice ice anyị nwere ike ịzọpụta 30% karịa igwe ice ice ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahọrọ m igwe ọkụ 20T / ụbọchị flake, ọ ga-emefu USD 600,000 obere maka ụgwọ ọkụ eletrik na afọ 20. Ọ bụrụ na ịhọrọ igwe ice flake ndị ọzọ, ọ ga-efu USD 600,000 karịa maka ụgwọ ọkụ eletrik ma ọ nweghị ihe ọ bụla. Ukem ice ice, ye ukem udomo ice flakes.
Emepụtara igwe akpụrụ mmiri anyị site na sistemu akpụrụ mmiri nke Vogt. Ha nwere njikwa mmiri mmiri zuru oke na evaporator, ezigbo mmiri mmiri, mgbasa mmanụ dị mma, sistemụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ nweghịkwa refrigerant mmiri na-alaghachi na compressor .........
Ọrụ ndị ahụ zuru ezu mere nke ọma na ị ga-enwe igwe igwe ice kachasị mma site na Herbin Ice Systems.
Anyị nwere igwe akpụrụ mmiri na ọkọlọtọ ndị China, ọkọlọtọ EU, ọkọlọtọ USA .....
Maka igwe akụrụngwa nwere ọkọlọtọ EU na USA, agba waya ga-agbaso iwu CE, onye na-anabata mmiri mmiri nwere valvụ nchekwa yana valvụ nwere njedebe 2, ụgbọ mmiri niile nwere asambodo PED .........
Iji ekwe nkwa ọrụ igwe 'ogologo ọrụ, anyị na-atụ aro ka ndị ahịa zụta akụkụ ahụ mapụtara yana igwe. Mgbapụta / moto / ihe mmetụta / kọntaktị / relays dị na ọnụahịa dị oke mma, otu ihe anyị na-akwụ ndị na-eweta anyị.
Anyị na-agbanye igwe akpụrụ mmiri n'ime igbe osisi e ji rụọ ọkọlọtọ, nke ejiri ogwe osisi fumigated mee. A na-anabata ha maka mba niile gburugburu ụwa.
Machines ga-ikesiike nke ọma na osisi igbe, ma ọ bụ na containers. Anyị ga-akpachara anya rụọ ọrụ niile dị mkpa iji gbochie mmebi nke ịma jijiji, na-ada ada site na ụlọ ọrụ m na ụlọ ahịa ndị ahịa.
A na-eme ka okpokoro ígwè ahụ sie ike ma ọkpọkọ na-eme ka okpukpu abụọ sie ike. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ nke China anaghị echebara nke a echiche.
Ndị ahịa kwesiri ịse foto iji gosipụta nrụgide nrụgide oge mbụ mgbe ha natara igwe ice. Ọ bụrụ na igwe ndị ahụ nwere mgbapụta ọkpọkọ, mgbawa, nsogbu nsogbu gas, anyị ga-akwụ ụgwọ maka mfu ha.